မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: အသည်း… ..မရှိတာပဲကောင်းမယ်
“မောင်”…ဗြောင် ခေါ်ချင်ပေမဲ့လဲယောင်လို့တောင် အခွင့်အရေးမရှိလို့လက်မှိုင်ချ ငေးမောနေသူပါ..တိbတိ b. ဒါကြောင့် မမီက ဆီပုံးတွေမှာ "မောင်" လို့လိုက်ရေးနေတာကိုး... :Pမိုးလင်းကမိုးချုပ် အလုပ်များစွာရှုပ်လို့လှုပ်မရတဲ့ လက်ရှိဘ၀မှာအသက်၀၀ ရှုလို့ မရရင်လဲမောင့် မျက်နှာ တ၀ကြည့်ဖို့ အရေးရောက်ရာအရပ်က အပြေးလာချင်သူပါ..ဒါဆို ဒီလိုလုပ်... မျက်နှာလေးကို ဗီနိုင်းထုတ်ပြီး မျက်နှာကျက်မှာ ကပ်ထားနော်...။အသက်ရှူတိုင်း ခေါင်းကိုမော့မော့ပြီးရှူ... :Pဒီအသည်းနှစ်ခါမကွဲအောင်..မရှိတာပဲ ကောင်းပါမယ်။အဲ... ဟုတ်တယ်... မရှိတာကောင်းတယ်။ ဒါဆိုရင် B တွေ C တွေလည်း ကြောက်စရာ မလိုတော့ဘူး...မမီရေ.. စိတ်မဆိုးနဲ့နော်.. အပျော်ပါ။ကဗျာလေး တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာ။ ခံစားချက်တွေကို သီကြွေးတော့ဒီအရေးတွေက တအားကိုကောင်းတာဗျို့။“မောင်”… လို့ တရားဝင်ခေါ်ခွင့် အမြန်ဆုံးရပါစေဗျာ....
မယ်လိုဒီရေ.. ဒီကဗျာလေး သိပ်ထိ ။ ဒါနဲ့ မောင် ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ မေးတော့ဘူးနော်း) ကဗျာလေးက ခံစားချက်အများကြီးနဲ့ ၊ ၀ိုင်းခံစားပေးရင် အရမ်းနှစ်သက်သွားတယ် ။
ဟေး ခုတလော သံဇကာခတ်ချင်တဲ့လူတွေ တဘ၀စာမျိုသိပ်ပြီး အင်ဖာနတီထိ ရွက်လွှင့်ချင်တဲ့လူတွေ ချည်းပါလား။ ခက်တယ် ခက်တယ်.. (ဘယ်လို မြှောက်ပေးရပါ့)
မမီရေ.. ခပ်ရဲရဲသာ ခေါ်ပစ်လိုက်.. ။ မြှောက်ပေးနေတာ။ :)
အသဲမရှိတာတော့ လုပ်ပါနဲ့ဗျာ.. မောင် ဆိုတာလေးကို ဗြောင် မြန်မြန်ခေါ်နိုင်အောင်.. ကိုသန့်ရဲ့ ဂုဏ်တော်ကိုးပါး ပုတီးစိပ်နည်းလေး စမ်းစိပ် ကြည့်ပါလား မမီ... အကြောင်းထူးရင်ပြန်ပြောအုံးနော် ကျနော်လည်း လိုက်စိပ်ရအောင်လို့ပါဗျာ. အဟိ
“မောင်” လို့ယောင်လို့တောင်ဗြောင်မခေါ်ချင်တော့ဘူးလား ခင်အခွင့်အရေးဆိုတာခင့်အတွက်သာ တစ်ယောက်တည်းမို့ရဲရဲတင်းတင်း ခေါ်လိုက်ပါခင်ခင်ခေါ်ရင် ဗျာ ထူးရမယ့် မောင့်အရေးခင်လေး မခေါ်နိုင်တော့မောင်တစ်ယောက် လက်မှိုင်ချကာမျောက်ထိုင်ထိုင်ပြီးဠင်းတမှိုင် မှိုင်နေမိတာပေါ့ ခင်
“မောင်”…ဗြောင် ခေါ်ချင်ပေမဲ့လဲယောင်လို့တောင် အခွင့်အရေးမရှိလို့လက်မှိုင်ချ ငေးမောနေသူပါ..တို့ကတော့အဲလို ဟုတ်ဘူး။ပြောင်ခေါ်မယ် "မောင်" မမယ်လိုဒီမောင်ကိုခေါ်တာနော်
ဒီကဗျာလေး အားပေးကြတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သက်ဆိုင်သူကတော့ မသိတာကခက်တယ်ဘယ်သိမှာလဲ သူက စိတ်ကူးထဲမှာပဲနေရတာကိုး ဟက်ဟက် :P